Kenya ayaa sheegtay in Imtixaanaadka Qaran uu dhici doono waqtigii loogu tala galay | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Kenya ayaa sheegtay in Imtixaanaadka Qaran uu...
Kenya ayaa sheegtay in Imtixaanaadka Qaran uu dhici doono waqtigii loogu tala galay
Dowladda Kenya ayaa ku adkeysatay in imtixaanaadka qaran ee shahaadiga ah ay u dhici doonaan sidii loogu tala galay iyo waqtigii jadwalkooda ahaa.
Wasaaradda waxbarashada ayaa horay u asteysay xiliyada ay imtixaanka gali doonaan ardayda dhameysaneysa wax barashada dugsiyada hoose dhex iyo kuwa sareba.
Arrintaan ayaa timid xili haatan uu is mari waa ka dhex aloosanyahay xukuumadda iyo ururada macalimiinta qaranka oo ku guda jira gadood shaqa joojin ah.
Wax barashada xiligii 3-aad ee sanad dugsiyeedka ayaa xaniban mudo 2 isbuuc ah, iyadoo macalimiinta ay dalbanayaan in loo sameeyo mushaar kordhinta ay maxkamada u xukuntay.
Gudiga adeega macalimiinta ee TSC ayaa sheegaya in shaqa joojinta macalimiinta ay sharci darro tahay, hase ahaatee barayaasha ayaa iyana dhankooda ku adkeystay in ay xuquuqdooda u doodayaan, isla markaana aysan fasallada ku noqon doonin ilaa inta mushaar kordhintooda laga xaqiijinayo.
Agaasimaha dhinaca is gaarsiinta u qaabilsan aqalka madaxtooyada Munyori Buku ayaa dhamaan waalidiinta dalka ugu baaqay in ay carruurtooda Schoollada geeyaan.
Mr Buku ayaa intaas ku daray in dowladda ay amni ku filan u qoondeysay dhamaan xarumaha wax barashada isla markaana uusan jirin waalidin ilmihiisa uga cabsan kara amni darro.
Masuuliyiinta macalimiinta ayaa bulshada u muujiyay in aysan mushkilad gaar ah wadin, maadaama arrintaan ay saameyn ba’an ku yeelatay ardayda schoollada dowladda iyo waalidiintoodaba.
Xog hayaha ururka macalimiinta KNUT laantiisa Cuntiga Mandera Kuulow Maxamed Sheikh oo la hadlay idaacadan Star Fm ayaa dadweynaha ka codsaday in aysan tallaabadooda dhibsanin, waxaana uu sharaxaad ka bixiyay arrimaha ay u gadoodsanyihiin.